Imikhiqizo yobisi omuncu namafayili okudla
Imikhiqizo yobisi oludakayo iyisici esibalulekile sempilo yabantwana. I-Kefir, i-yogurt, i-acidophilus, i-yoghurt-awukwazi ngisho nokubala ... Umuntu waqala ukusebenzisa imikhiqizo yobisi omuncu iminyaka eminingana ngaphambi kukaKristu, engatholi izakhi kuphela, kodwa futhi ayenayo imithi. Usebenzisa ubisi, ikamela, ubisi kanye nobisi lwe-mare, wathola ngokudla okuwusizo nokudla okumnandi. Imikhiqizo yobisi oludakayo yandisa ukumelana nezifo, ubuyisele amandla, ithuthukise umsebenzi wepheshana lomathumbu. Imikhiqizo yobisi omuncu enezingubo zokudla zomntwana yizakhi zamavithamini ezibaluleke kakhulu.
Ukwakheka nokugcinwa kwegciwane lesandulela ngculazi, indima ebalulekile idlalwe yi-microflora yamathumbu, izicubu ze-lymphoid zamathumbu emathumbu namastokines - izici zokuxhumana phakathi kwe-intercellular. Uhlelo lonke lubangela ukuqashelwa, ukubhujiswa kwama-bacterium we-pathogenic kanye nama-virus. I-microflora yezinambuzane iyinhlangano evamile kanye nokuphikisana kwama microorganisms ahlukahlukene.
Ubani ohlala emzimbeni?
I-microflora evamile emathunjini emathunjini isethwe ngesikhathi sesibili sokukhulelwa, kanti enye, kuhlanganise ne-pathogenic, isana esitholayo ngesikhathi sithola umsele wokuzala nokudla kokuqala. Izinkinga ezivamile ngesikhathi sokukhulelwa, ukubeletha ngaphambi kwesikhathi, isisindo sokubeletha emanzini, ukubeletha emanzini kamuva, ukuhlukana emagcekeni omama nengane, ukwethulwa kwangaphambili kokudla okuhambisanayo nezinye izici eziningi eziphazamisa i-flora evamile. Ukungalingani kwe-flora kuholela ezifweni ezibandayo nasezintweni, izingane zihamba kancane kancane, zikhala kakhulu. Indlela yokuthuthukisa isimo? Zama ukusebenzisa ama-prebiotics kanye nama-probiotics asithinta i-microflora yamathumbu.
Ama-prebiotics: i-fructooligosaccharide, i-inulin, i-lactulose, i-lactiol, efaka i-fibre yokudla kwemvelo, isebenzise ukukhula komthamo wayo wamathumbu. Lokhu kuvuselela umsebenzi obalulekile we-bifidobacteria futhi uphazamise imifino ye-pathogenic. Ama-prebiotics anesandla ekwakhekeni kwamaminerali, aqinise izicubu zamathambo, angumthombo we-carbohydrate namandla kumagquma ajwayelekile, avuselele ama-intestinal peristalsis, avimbele ukuqotshwa. I-prebiotics icebile ubisi besifazane, imikhiqizo yobisi, okusanhlamvu, ama-corn flakes, ubhontshisi, i-peas, i-garlic, ama-artichokes, njll.
Ama-probiotics aphila ezincane ezincane: bifido- ne-lactobacilli. ehlobene ne-microflora yomzimba emathunjini evamile. Ngenxa yama-probiotics, ukugcwala kwe-microclculation okugcwele kwenzeka ezinhlakeni, ibhalansi ye-microflora yamathumbu amakhulu libuyiselwa emuva kokusetshenziswa kwama-antibiotics, ukugonywa, ukuhlanganiswa kwama-enzyme yokugaya, amavithamini ayenziwa, futhi ibhalwa le-antibacterial lidalwa. Naphezu kwezinhlobonhlobo zezenzo ezinhle, ama-probiotics ngokwawo azwela kakhulu ezintweni eziyingozi eziholele ekutheni zithathe i-neutralization noma zinciphise ukukhula kwazo. Ikakhulukazi iyingozi ngama-antibiotics, ama-hormone, kanye nokudla okunomsoco, okungenayo i-fibre fiber. Imikhiqizo yobisi ephucuziwe enomphumela we-probiotic kufanele ukuthi ube ngumsoco womntwana! Ama-probiotics angeke abe nesisekelo sobisi olumuncu, esibalulekile kubantwana abane-lactose insufficiency. Ukuze wenze lokhu, izinto ze-probiotic zengezwe kumxube noma iphalishi. Ama-probiotics asetshenziselwa i-dysbacteriosis, ukuqotshwa, isifo sohudo, ukunciphisa ukudla, ukugcina ingculazi. Ama-synbiotics - ingxube yama-prebiotics nama-probiotics. Ukuqiniselana, kuthinta ama-microflora emathumbu. Kodwa-ke, sicela wazi ukuthi ngaphandle kweseluleko sikadokotela, awukwazi ukusebenzisa noma yimiphi imithi kanye nezithako zokudla ngokwakho. Izindlela ezingcono kakhulu zokuvimbela nokwelapha ukungalingani kwamantombazane emathunjini emathunjini kubisi lomama, kanye nezingane ezindala - ukudla okunama-lactic acid nezitsha eziqukethe i-fiber fiber.
I-Cottage ushizi ekudleni kwezingane
Ukudla kwengane emva konyaka owodwa
Indlela yokufaka ifomula lomntanakho wengane
Ukungabi nesifiso kwezinsana
Ukudla okunye nokuphuza komntwana
Izandla ze-cones zeNyaka Omusha ngezandla zabo enkulisa nasezikoleni
Ukubhaliswa kwegumbi lomntwana ngosuku lokuzalwa
Indlela yokuyeka umnandi: 5 funny lifhaki
Amaski esikhumba esomile ebusweni ngezandla zabo
Banana mask for izinwele split
Indlela yokubuyisela izipikili ngemuva kokwakha
USergei Bezrukov waqala ukukhuluma iqiniso ngezingane ezingekho emthethweni
Ukuzithiba kokudla uma ulahlekelwa isisindo
Izici zobuso: inani
Isifo esesiswini esishaqisayo somntwana osanda kuzalwa
Ungathola kanjani ukuzijabulisa okuthakazelisayo kuwe